Itoobiya oo cagta saartay jidkii Koonfurta dalka Suudaan af gambigii ka dib – Xeernews24
Itoobiya oo cagta saartay jidkii Koonfurta dalka Suudaan af gambigii ka dib
23. Juni 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
warara hor dhac oo marba marka ka dambaysa is badali ayaa sheegi in Taliyihii Guud Ee Ciidanka Milatariga Itoobya General Seara Mokennon, iyo Madaxwaynihii deegaanka Axmaarada Dr. Ambachew Mokennon iyo Saraakiil Kale oo farabadan ay ku dhinteen afgambi maanta ka dhacay dalka Itoobya.
Magaalooyinka Bahirdar Iyo Addis Ababa labadaba waxaa kasocda hawlgal milatari xaaladuna way qasan tahay waxaa la jaray khadkii Internka ee dalka waxaa yar ama adag in la helo warar sugan khad laanta darteed.
Waxaa jirtay silsilad xidhiidhsan oo afgambiga soo abaabushay waxaa marar horaa la saadaaliyey in Itoobiya ay salka dhigi dooniin raysalwasaare Dr,Abye yahay nin aan xaalada lagu jiro maarayn karayn xukunkuna ay Amxaaro ka tuuri doonto.
Raysalwasaare Abiy Ahmed oo war baahinta ka hadlay wuxuu cadeeyay dilka taliyaha ciidanka inkasta oo uuna magaciisa sheegin.
Warar kale ayaa lasoo sheegi in taliyihii sirdoonka itoobiya General Hassan Ibraahim xabsiga loo taxaabay chief of Ethiopian intelligence under arrested
Wuxuu kasoo jeedaa Gobalka Axmaarada saraakiil badan ayaa xabsiga Caawa la dhigay Afganbiga Dhacay waxaa la ogaaday in uuna Ku koobnayn qasashada Maamulka Axmaarada kaliya ee wuxuu ka socda qaybo badan oo dalka ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/1200px-Flag_of_Ethiopia.svg_.png 600 1200 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-06-23 01:23:352019-06-23 01:23:35Itoobiya oo cagta saartay jidkii Koonfurta dalka Suudaan af gambigii ka dib
Maxay Ka Wada Hadleen Raysal Wasaaraha Itoobiya iyo Wasiirka Arimaha Dibada... Dhgeyso: Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Afgambigii Dhicisoobay Ee Dhacay Itoobiya...